Talmodan'i Babilona - Howling Pixel
Ny Talmodan'i Babilona dia asasorara misy ny fivoasana ny Soratra Masin'ny jodaisma izay nangonina tamin'ny taonjato faha-6 tao amin'ny diaspora jiosy tany Babilonia. Iray amin'ny Talmoda roa izy ka ny faharoa dia ny Talmodan'i Jerosalema. Ny famelabelarana ao amin'ny Talmodan'i Babilona dia nalamina ho vondron-kevitra enina, sahala amin'ny Misnà, atao hoe amin'ny teny hebreo hoe sedarim. Ny vondron-kevitra tsirairay dia mamahavaha lohahevitra foibe miaraka amin'ny lohahevitra maro hafa koa.
Amin'ny teny hebreo dia atao hoe תלמוד בבלי /Talmud Bavli ny Talmodan'i Babilona.
Ny demony na demonia, araka ny finoan'ny fivavahana maro, dia zavaboary tsy hita maso manana hery ratsy mahatonga ny fahaverezan'ny olombelona entiny hanao ny ratsy. Ao amin'ireo fivavahana abrahamika dia iantsoana ireo fanahy na anjely nanaraka an'i Satana na Devoly nikomy tamin'Andriamanitra ny demony. Ao amin'ireo fivavahana ireo sy ny fivavahana maro hafa koa dia heverina fa afaka petraka amin'olona ny demony ka ilana ny famoahana na ny fandroahana azy. Ny anarana hoe Demony koa dia matetika asolo ny hoe Satana na Devoly, indrindra rehefa ampiasaina hilazana zavatra tokana sy ialohavan'ny mpanoritra "ny" na "ilay" ("ny demony", "ilay demony"). Ny sampan'ny teolojia andalinana ny fomba sy ny fahefana ary ny ambaratonga misy eo amin'ny samy demony dia ilay taranja atao hoe demonolojia, izay zana-taranjan'ny anjelolojia, amin'ny maha anjely potraka azy ireo. Tsy ao amin'ny fivavahana jiosy sy kristiana ary silamo ihany no iresahana ny demony fa amin'ny okoltisma sy ny literatiora ary ny fedrà sasany koa.
Ny Gemarà, amin'ny jodaisma, dia fivoasana sy fanaovana hevi-teny isan'ny mamorona ny Talmoda, dia ny Talmodan'i Babilona sy ny Talmodan'i Jerosalema. Ny Misnà amin'ny teny hebreo sy ny Gemarà amin'ny teny arameana no mitambatra mamorona ny Talmoda. Ny Gemaràn'ny Talmodan'i Babilona dia nosoratana tamin'ny fiteny arameana atsinanana fa ny Gemaràn'ny Talmodan'i Jerosalema kosa dia nosoratana tamin'ny fiteny arameana andrefana. Ny Gemaràn'ny Talmodan'i Babilona no feno sy voalamina indrindra. Ny Gemarà dia ahitana ireo ady hevitra sy ny fanazavana ary ny famelabelarana ny Misnà, izay mampifandray azy mazava kokoa amin'ny Tanakh.
Ny Jiosy Mitsrahima na Mitsarahima izay dia ireo taranaky ny Jiosy any Atsinanana Akaiky, any Kaokazy hatrany Azia Afovoany ary any India izay misy fizarana ara-poko sy ara-kolontsaina maro ka tsy tokam-bolo loatra miohatra amin'ny Askenazy sy ny Sefarada. Amin'ny teny hebreo dia atao hoe מזרחים / Mizra'him, izay midika hoe "Tatsinanana" izy ireo. Atao hoe עֲדוֹת-הַמִּזְרָח / Edot HaMizra'h ("Vahoaka any Atsinanana") koa izy ireo. Tafiditra ao anatin'izy ireo koa ny Jiosy arabo izay Jiosy mialokaloka any amin'ireo firenenan arabo, ary ireo Jiosy avy amin'ny faritra iantraikan'ny kolontsaina sy ny fiteny jiosy (kaokaziana sy torka sy korda ary persana indindra). Isan'izy ireo noho izany ny Jiosy ao Afrika Avaratra, any Iràka, ny Iemena, any Iràna, any Bukhara,any India, any Jeorjia, any Kaokazy ary any Kordistàna. Na dia samy hafa fiaviana azy izy ireo dia avy amin'ny Talmodan'i Babilona ny lalàna mifehy azy rehetra ireo. Ny fombam-pivavahany dia manakaiky ny an'ny Jiosy sefarada sy ny Jiosy Magrebina.
Ny Talmoda dia fanangonan-dalàna izay ahitana ny fivoasana ny Torah. Ny Talmoda dia fitambaran'ny fehezan-dalàna atao ho Misnà (hebreo: מִשְׁנָה / Mishnah) sy ny fivoasana ny Misnà atao hoe Gemarà (hebreo: גמרא / Gemarah). Ny zavatra ao amin'ny Talmoda izay mikasika ny fanapahan-kevitry ny raby momba ireo zavatra mahakasika ny lalàna nefa misy tsy itovizan-kevitra no mamorona ny atao hoe Halakà (hebreo: הֲלָכָה / Halakha), ary ny angano sy fitantarana madinika ampiasaina ho enti-manome ohatra momba ny lalàna dia atao hoe Agadà (hebreo: אגדה / Agadah).
Amin'ny teny hebreo dia atao hoe תַּלְמוּד / Talmud, izay moidika hoe "fandalinana" ny Talmoda.
Misy karazany roa ny Talmoda, dia ny Talmodan'i Palestina sy ny Talmodan'i Babilona. Ikambanan'ireo endrika roan'ny Talmoda ireo ny Misnà, nefa samy manana ny Gemaràny izy roa ireo. Ny Talmodan'i Palestina, izay atao hoe koa Talmodan'i Jerosalema, dia nosoratan'ny manampahaizana jiosy tao Palestina teo anelanelan'ny tanonjato faha-3 taor. J.K. sy ny fiantombohan'ny taonjato faha-5. NyTalmodan'i Babilona dia vita soratra tamin'ny taonjato faha-5. Izy no lasa soratra manam-pahefana noho ireo sekolin'ny raby tany Babilona tsy ravan'ny zava-niseho rehetra mandritra ny taonjato maro, raha miohatra amin'ny an'i Palestina.
Ny Talmoda, amin'ny hevitra mifintin'io teny io, dia ireo asa soratry ny manampahaizan'ny Talmoda, sy ny fivoasana ataony dia fandraisanana anjara lehibe indrindra amin'ny literatioran'ny raby teo amin'ny tantaran'ny jodaisma. Isan'ny malaza indrindra ilay atai hoe Mishna Torah nosoratan'ilay raby sy filozofa ary dokotera jiosy espaniola atao hoe Mimonida. Famintinana ny literatiora rabinika momba ny lalàna tamin'ny androny izany. Ny fivoasana fantatra indrindra dia ny an'ny Talmodan'i Babilona izay fantatra noho ny asan'ny raby atao hoe Shlomo ben Itzhak na Rashi sy ireo manampahaizana jiosy atao hoe tosapista izay niaina tao Frantsa sy tao Alemaina teo anelanelan'ny taonjato faha-12 sy faha-15, ka isan'izy ireo ny zafikelin'i Rashi.
Ny Talmodan'i Jerosalema, izay antsoina hoe koa Talmodan'i Palestina na Talmodan'i Israely, dia fanangonan-dahatsoratra mirakitra ny fivoasana ny Misnà sy ny ady hevitra ny amin'izany izay nosoratan'ireo raby tao Palestina hatramin'ny taonjato faha-2 ka hatramin'ny taonjato faha-5. Tsy tao Jerosalema akory no nanoratana an'io Talmoda io fa tany Galilea ny ankamaroany. Manampy ny Talmodan'i Babilona ny Talmodan'i Jerosalema nefa io voalohany io no tena ampiasaina ao amin'ny fivoasan'ny jodaisma ny Torah.
Amin'ny teny hebreo dia atao hoe תַּלְמוּד יְרוּשַׁלְמִי / Talmud Yerushalmi ny Talmodan'i Jerosalema.